Kutheni iikhamera zomzimba eziLwelwe ngumzimba zinceda uLawulo loMthetho? | Izisombululo ze-OMG
Itekhnoloji ichazwa njengeseti yezakhono, ulwazi, okanye izakhono ezisetyenziselwa izinto ezixhasayo ukufikelela kwisiphelo esithile; Kodwa kwicandelo lezokhuseleko, siyintoni isiphelo? Kuyabonakala ukuba ukunciphisa ulwaphulo-mthetho, nangona kunjalo, ukuyilwa kwakhe bekungasoloko kunxulumana nesi siphelo.
Ukusukela ukuqala kwembali, umntu uye wafuna ukuwela imiqobo yokungazi kwaye oku kukhokelele kwitekhnoloji esisiseko yobuchwepheshe, kodwa kubalulekile kwinkqubela phambili elandelayo, enje ngesondo, isinyithi, njl.
Iikhamera zomzimba ziirekhoda ezenzelwe ukunxitywa kwi-unifom yegosa lokunyanzeliswa komthetho, ukubonelela ngokurekhodwa komsindo kunye nokubonwayo kweziganeko ngokwembono yalowo uzinxibileyo, ekwenzeni imisebenzi yayo.
Iiarhente zokunyanzelwa komthetho zisebenzisa iikhamera zevidiyo yomzimba (i-CVC) ukurekhoda izandi kunye nemifanekiso ngexesha langempela ngexesha leziganeko kunye nokusebenzisana nabantu ngokubanzi, amangqina kunye nabarhanelwa ukuba bazisebenzise emva koko njengenxalenye yophando kunye nokuqokelela ubungqina. Iirekhodi ezenziwe nge-CVC zongeza ixabiso kubungqina obuqokelelweyo; akufuneki babonwa njengowona mthombo wobungqina.
Inkqubo ye-HVAC inekhamera encinci eqhotyoshelwe kwiyunifomu yamapolisa okanye iiglasi zelanga okanye enxitywe njengesigcina-ntloko, erekhoda izandi kunye nemifanekiso xa kudibana nepolisa noluntu. Ulwazi olurekhodiweyo lwedijithali lurekhoda imicimbi ngokwembono yegosa xa lisenza imisebenzi yalo.
I-CAC yenzelwe ukurekhoda iirekhodi ngokucacileyo eziza kubonelela ngengxelo ethembekileyo, echanekileyo nekhohlakeleyo yokuchaphazeleka kweziganeko ezichaphazela amalungu e-Arhente yokunyanzeliswa komthetho. Isizathu sokukwenza oku kukwenza izinto elubala kwaye kufuneka ziphendule xa imibuzo okanye inkxalabo iphakamile okanye ukubekwa kwetyala kufanelekile ngenxa yeso sigameko, kunye nokubonelela ubungqina bokutshutshiswa xa kwenzeke isigameko. kwafuneka ukuba ahambe kunye nezenzo zolwaphulo-mthetho.
Iiarhente zokunyanzeliswa komthetho zenze uphononongo lokuba kunokwenzeka ukuba kusetyenziswe i-CVC ebandakanya uphononongo olucokisekileyo lwemicimbi yabucala enzima kunye nemicimbi yezomthetho okanye yomgaqo-nkqubo. Izixhobo ze-CAC kunye netekhnoloji zivela ngokukhawuleza, kwaye iiarhente zihlala ziphonononga imigaqo-nkqubo yazo, iinkqubo, kunye nezixhobo ukuqinisekisa ukuba kusetyenziswa amanyathelo afanelekileyo okunyanzeliswa komthetho. Eli nqaku lomsebenzi libandakanya uphando kunye neeprojekthi zokulinga ukuvavanya itekhnoloji entsha. Injongo yearhente zoNyanzeliso-mthetho kukubonelela ngamalungu angaphambili kwitekhnoloji yezobuchwepheshe kunye nezixhobo zendaba zokuphucula amandla abo ekuphenduleni kwizinto ezintsha ngelixa beqinisekisa ukhuseleko loluntu kunye namapolisa.
Olu vavanyo luchonge ngokuchanekileyo iimpawu zeCAC ukuvavanya ngcono iimfuno ze-arhente yonyanzeliso lomthetho ngokuphindwaphindwa kweziganeko ezibandakanya ukusetyenziswa kwamandla. Ngokusekwe kwiindlela zokuvavanya kunye neeparameter ezibonelelwe yimeko ezinokuphindaphindwa, bekunokwenzeka ukuba kugxilwe kwizinto ezithile ezinxulumene nayo yonke imiba yokusetyenziswa kwamandla omzimba ukumisela eyona ndawo yokubeka ikhamera kwigosa lamapolisa elenza imisebenzi yalo nakwi Iimpawu ekufuneka zenziwe yi-CVC ukuhlangabezana neemfuno zokuqokelelwa kobungqina.
Iinkonzo zamapolisa zisebenzisa itekhnoloji entsha ukugcina amapolisa kunye noluntu abanxibelelana nabo benokuphendula ngayo nayiphi na inyathelo. I-CVC ibonelela ngokusekuhleni kunye noxanduva kubo bonke abachaphazelekayo kwaye inika umfanekiso ophantsi wento amagosa asebupoliseni ahlangabezana nayo ihlala inamandla kwaye inamandla kakhulu. Iiprojekthi ezinje ngezi zinokuvavanya kwaye zichonge ixabiso elongeziweyo lezixhobo ezitsha zamapolisa. Njengombutho wamapolisa wale mihla, ii-arhente zogcino-mthetho zihlala ziphanda kwaye zivavanya itekhnoloji entsha ukufezekisa igunya layo lokukhusela abahlali. Injongo yale ndlela ihlala injalo- ukunika amalungu ee-arhente zogcino-mthetho ngezixhobo azidingayo ukoyisa imiceli mngeni enxulumene nemeko yangoku yobupolisa kwindawo eguqukayo.
Umngcipheko wabucala wabonwa ngexesha lovavanyo lwempembelelo yabucala (PIA), kwaye kwenziwa ezi ngcebiso zilandelayo ukuziphungula:
Iiarhente zoNyanzeliso-mthetho ziya kuphuhlisa umgaqo-nkqubo wokuqinisekisa ukugcinwa, ukulahlwa nokugcinwa kweerekhodi ezenziwe nge-CVC;
Iiarhente zokunyanzeliswa komthetho aziyi kukurekhoda konke ukudibana kwayo kunye neengxoxo kunye noluntu;
Xa amalungu e-arhente zisebenzisa i-CVC kwisakhelo esisemthethweni semisebenzi yabo, baya kuyenza ekuhleni
Kangangoko kunokwenzeka ngobuchule, iiarhente zoMthetho zokunyanzeliswa kwamalungu ziya kucebisa abemi xa befotwa;
Ekupheleni kwenguqu nganye, yonke ividiyo ebhaliweyo iya kufakwa kwiiarhente ezivunyiweyo ezikhuselekileyo zokugcina izinto, ukugcinwa, nokulahlwa;
Abemi banokucela ukubona ulwazi lwabo lobuqu. Izicelo zokufikelela kubhaliso lwe-CAC olwenziwe phantsi koMthetho woFikelelo kuLwazi kunye noMthetho woBucala ungangeniswa kwiphepha lewebhu le-ATIP.
Ukusetyenziswa kwee-CACs kuya kwaziswa kuluntu ngokubanzi, ngakumbi kumajelo apho kufakwa khona iikhamera, nangaphakathi kumalungu ee-arhente zogcino-mthetho ukubazisa ngemigaqo-nkqubo kunye nezona ndlela zilungileyo zokusebenza malunga noku.
Ii-CACs zisetyenziselwa ukuqokelela ubungqina bophando lolwaphulo-mthetho kunye nokuzalisekisa ii-arhente zokunyanzeliswa komthetho ukuzibophelela ekwakheni ubudlelwane ngokukhuthaza amakhaya akhuselekileyo noluntu olukhuselekileyo kwilizwe liphela. Ukusetyenziswa kwee-CACs kuyakuxhasa ugunyaziso lweearhente zogcino-mthetho ukuthintela ulwaphulo-mthetho, ukuphanda amatyala, ukugcina uxolo nocwangco, ukunyanzelisa imithetho, nokwenza igalelo kukhuseleko lwesizwe. Ukuqinisekisa ngokhuseleko lwamagosa aseburhulumenteni, iindwendwe ezihloniphekileyo, kunye namalungu eenkonzo zamanye amazwe, kunye nokubonelela ngeenkonzo zenkxaso zokusebenza kwezinye iiarhente zokunyanzeliswa komthetho. Xa benxibelelana noluntu, amalungu aya kusebenzisa ii-CACs ngokokubona kwawo, kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo yokusebenzisana noluntu. Iiarhente zogcino-mthetho zizinikele ekukhuseleni ulwazi lomntu buqu oluqokelelweyo kunye nokuphononongwa ngokuqhubekayo kwemigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zokuqinisekisa ukuba ziyahambelana nemithetho yomanyano.
Kutheni iikhamera zomzimba eziLwelwe ngumzimba zincedisa uLawulo loMthetho? gqibela ukuguqulwa: Disemba 2nd, 2019 by admin
4339 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje